मातातीर्थ-माल्टा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन नबन्दा ४.८६ मेगावाट बिजुली खेर::Radio Chhahari
मातातीर्थ-माल्टा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन नबन्दा ४.८६ मेगावाट बिजुली खेर
माघ १५, काठमाडौँ । मातातीर्थ-माल्टा ३३ के.भी प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा नबन्दा गत चैतदेखि दुई विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ६.३६ मध्ये ४.८६ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। ४.३६ मेगावाटको टुंगुन-ठोस्ने खोला तथा २ मेगावाटको खानी खोला आयोजना २०७२ चैतमै निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ।
प्रसारण लाइन नबन्दा ती आयोजनाको आधाभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको हो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये १.५ मेगावाटमात्र लखनखेल वितरण केन्द्रमा जडान गरी वितरण भइरहेको छ भने बाँकी ४।८६ मेगावाट बिजुली झन्डै एक वर्षदेखि खेर गइरहेको छ। ती आयोजनाको पूरै बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा लाइनमा जोडिए मुलुकको लोडसेडिङ न्युनिकरणमा थोरै भए पनि टेवा पुग्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरूको छ । जलविद्युत (पावर हाउस) देखि माल्टा सबस्टेशन डेलिभरी केन्द्रसम्म भने खानी खोला जलविद्युत आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ।
ठेकेदारले समयमै काम गर्न नसक्ता माल्टादेखि मातातीर्थ सवस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी त्रिपुरेश्वररजयदुर्गे जेभीले १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि २०७१ भदौ ९ मा १८ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। एक वर्षको थपिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि ठेकेदारले ३५ प्रतिशत प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ।